Accueil > Gazetin'ny nosy > DFP: Ny fandrafetana ny lisi-pifidianana no fototra ny halatra
DFP: Ny fandrafetana ny lisi-pifidianana no fototra ny halatra
Andao isika Malagasy rehetra hiaraka hanara-maso sy handrafitra ny lisi-pifidianana mba hialana amin’ny halatra ataon’ny fanjakana sy ny antokon’ny fitondrana. “Ity lisi-pifidianana ity no fototra ny olana”, hoy ingahy Doudou izay filohan’ny fikambanana DFP (Dinika ho fanavotam-pirenena).
Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety omaly alarobia faha 06 desambra 2017 tetsy amin’ny Bon Accueil Ambatonakanga ny mpikambana ao amin’ny DFP izay notarihin’i Doudou sy ny birao ara-dalàna miaraka aminy izay nahitana an’ingahy Alphonse Andrianambinina, ary ingahy Robert. Tamin’izany koa no nilazana tamin’ny mpanao gazety fa tafatsangana ara-panjakana ny fikambanana.
Handatsaka olona ho fidiana ho filoham-pirenena ny DFP, na hanohana olona amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ho avy izao. “Tsy afaka miala amin’izany isika”, hoy izy, “satria lalàna no mametra izany, na dia ny dinika ho fanarenana ifotony aloha no tokony hatao vao hiroso amin’izany fifidianana izany”. Noho izany dia tsy maintsy ho mailo isika amin’ny halatra hataon’ny fanjakana amin’izany fifidianana izany. “Any amin’ny fandrafetana ny lisi-pifidianana no fototra ny halatra voalohany ka tokony hiara-mientana amin’ny fandrafetana ity lisitra ity isika rehetra”. Izahay ato amin’ny DFP manokana dia hidina ifotony any amin’ny faritany hanentana ny olona sy hiara-miasa amin’izy ireo mba hisakanana ny hisian’ny hosoka ataon’ny fanjakana sy ny antokon’ny mpitondra. Variana amin’ny ady an-trano ny mpanao pôlitika Malagasy ka tsy mieritreritra akory ny olana fototra raha toa ka hiroso ihany amin’ny fifidianana amin’ny taona 2018 io. Efa misokatra amin’izao fotoana izao ny fisoratana anarana ao anatin’ny lisi-pifidianana ka izany no tokony himasoan’ny mpiray tanindrazana rehetra fa indrindra izahay mpanao pôlitika. “Tsy ilaina volabe izany”, hoy i Doudou, “fa ny tsirairay ihany dia efa afaka misoroka izany raha toa ka tiantsika ny hiova sy hiala amin’izao fanjakana tsy manjary izao”. Ny manahirana dia miandry vola ny Malagasy vao mihetsika ka lasa vidian-dafo izany amin’ny fiainam-pirenena aorian’ny fifidianana. Efa ampy izay fijaliana izay ka mitaky fiaraha-mientana ny fialana amin’izany raha toa ka tiana ny handresena ny pôlitika mampahantra vahoaka ataon’ny fanjakana amin’izao fotoana izao io.